पशुपतिशमशेरले भने– ४ कारणले गर्दा पार्टी फुटाउनुपर्‍यो
नेपाल लाइभ शुक्रबार, भदौ १६, २०७४, १६:४२
काठमाडौं– २०७३ फागुनको पहिलो साता पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एकीकरण हुँदा धेरैले वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणालाई पार्टी कमल थापालाई बुझाएको आरोप लगाएका थिए। तर, पार्टी एकीकरण भएको ५ महिना नबित्दै राणाले थापासँग विद्रोह गर्दै छुट्टै पार्टी राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका छन्।
पहिले पार्टी कमल थापालाई बुझाएको आरोप लगाउनेहरु यतिबेला राणाको अप्रत्यासित कदमबाट आश्चर्यमा परेका छन्। उनीमाथि अनेकौं आरोप पनि लागेको छ। तर, राणालाई खासै महत्व नदिने विश्लेषकहरु अहिले राणाको कदमलाई ‘चतुर राजनीतिज्ञ’ को संज्ञा दिन थालेका छन्।
राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा राणा आफ्नो पक्षको ११ जना सासंद बोकेर थापासँग मिसिन पुगेका थिए। तर, थापासँग छुट्टीदा उनी २० सांसद बोकेर बाहिरिए। एकता महाधिवेशन भएको १ सय ८० दिन पनि नबित्दै पार्टी फोड्नुको कारण अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन।
तर, नेपाल लाइभसँगको साक्षात्कारमा राणाले ४ मुख्य कारणले गर्दा आफूले पार्टी फुटाउनु परेको खुलासा गरेका छन्।
राणाले पार्टी एकता गर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम आउने र पार्टी तेस्रो स्थानमा पुग्ने आशा गरेको बताए। तर, निर्वाचनको परिणाम त्यो अनुरुप नआएको र पार्टीको लज्जास्पद हारले एकतालाई जनताले नरुचाएको दाबी गरे। ‘स्थानीय चुनावले एकतालाई अस्विकार गर्यो,’ उनले भने।
उनले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हारको प्रमुख कारण थापाको नेतृत्व असफल भएको रुपमा अथ्र्याए। ‘जुन आधारमा एक भएका थियौं। त्यो अनुसार काम भएन। पार्टीमा सरसल्लाह भएन। एकतन्त्रीय ढंगले उनी हिँड्न खोजे। रणनीति पनि देखिएन,’ उनले भने।
आम कार्यकर्तामा ठूलो निरासा देखिएको र जुन प्रकारले थापा अगाडि बढिरहेका थिए, त्यसले निरासा फैलिएको आरोप राणाले लगाए। ‘आम कार्यकर्ताको माग अनुसार हामीले छुट्टिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने।
पार्टी फुटाउनुपर्ने ४ कारण
१. पार्टी एकीकरण गर्दा राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने थियो। तेस्रो स्थानको आशा गरेका थियौं। तर, लज्जास्पद हार बेहोर्नुपर्यो। जनताले एकतालाई अस्विकार गरे।
२. हारको पछाडि कमल थापाको नेतृत्व कारण रह्यो। उनको नेतृत्व क्षमता असफल भएको हो।
३. जुन आधारमा एकता भएको थियो। पार्टीमा कुनै सरसल्लाह हुँदैन्थ्यो। एकतन्त्रीय ढंगले पार्टी सञ्चालन गरे। उनीसँग पार्टी सञ्चालन गर्ने कुनै रणनीति पनि देखिएन।
४. आम कार्यकर्तामा यसरी चल्दैन भन्ने गुनासा आउन थाले। कार्यकर्ताको मागअनुसार नै अलग हुनुपरेको हो।